Indlela yokwenza indiza ye-origami, isigaba samakhono, izithombe zesinyathelo ngesinyathelo. Fighter kusuka ephepheni ngezandla zakhe, umdwebo, ividiyo
I-Origami iyimidwebo yaseJapane yasendulo lapho zonke izibalo zephepha zigcwele incazelo nokufanekisela. Kule nqubo, ungadala noma yini oyithandayo, konke kuzoxhomeka emcabangweni wakho. Ama-Masters azenzi izilwane nezinyoni kuphela, kodwa futhi ama-novelties of technology - amathangi, izindiza, imicibisholo. Sinikeza isigaba samakhono, indlela yokwenza indiza ye-origami, engeke ibe ngumhlobiso wehelfensi kuphela, kodwa ingahamba. Isithombe sesinyathelo ngesinyathelo sizosiza ukwenza inqubo ibe mnandi futhi ilula.
ishidi lephepha le-A4 (elikhethekile kumklami noma evamile kumkopishi);
Amaphoyinti, amapensela, amapenki azizwa-amaphuzu - umhlobiso (ozikhethela).
Indlela yokwenza indiza ye-origami - isinyathelo ngesinyathelo imfundo
Thatha ucezu lwephepha, uligobe kuqala,
khona-ke asikhohlisi. Ngaphezu kwalokho, siguqa.
Siyaqhubeka nokusebenza ngalesi siqephu.
Manje ugoba izinhlangothi zomsebenzi wokusebenzela kusukela ekhoneni kuze kube phakathi, njengokungathi uhlukanisa umugqa ube yizigaba. Okokuqala - enkulu kakhulu, ungabikho.
Qaphela: Ukugoba unxantathu omkhulu udinga ukuhamba kancane, njengoba kukhonjisiwe esithombeni, ukuze umugqa wezintambo ugijime kusukela ekhoneni leshidi ukuya phezulu kwelayini lombandela ohlukanisa umugqa oyingxenye. Khona-ke sigoba izintathu ezincane. Lezi zibopho zizosiza esikhathini esizayo ukulungisa kahle umsebenzi wokusebenza.
Manje udinga "ukusakaza" amaphiko endizeni. Udinga ukuhlunga ama-triangles.
Ukuze uvula kalula umsebenzi wokusebenza, kuyadingeka ukuba ucindezele yonke imigqa yokuhlunga kahle. Ekugcineni, lesi sibalo kufanele siphume.
Manje uphinde ugobe izintantathu ezincane emgqeni ophakathi - kuqala ezingaphandle, khona-ke izintathu zangaphakathi. Lesi sibalo cishe asizange sishintshe izintathu ezintathu kuphela.
Manje phendulela umsebenzi wezintambo phansi bese ugoba ingxenye engxenyeni ehlukile - njengoba kuboniswe esithombeni. Unxantathu waphuma.
Bend umsebenzi owenziwe ngesigamu ngaphandle kokuwujika. Okusho ukuthi, ngaphandle kumele kube ngaphakathi.
Manje - ohlangothini ngalunye godu ayingxenye - yenza amaphiko.
Bese-ugobe ingxenye engezansi kwephiko, ikhoneni elibukhali lesxantathu kufanele linciphise kancane ngaphandle komzimba wendiza. Senza ukuqhutshwa okunjalo ezinhlangothini zombili zezindiza.
Manje senza indiza yethu ibonakale njengomphathi. Ukuze wenze lokhu, vula amaphiko.
Ukuthinta okugcina - kuqondisa amaphiko ezindiza, ebambe ngomzimba.
Indiza yethu yokulwa isilungile.
Ngingathanda ukwethemba ukuthi iklasi lethu lenkosi linike impendulo yombuzo - indlela yokwenza indiza ye-origami. Abafighters abanjalo bangenziwa abambalwa uma ufuna ukudweba noma ukwenza ngephepha elimibalabala. Futhi uhlele ukuncintisana nabangani egcekeni noma ngisho nasefulethini.
Isikhathi esihle sokudlula!
Ubuciko besimo seKhisimusi nezingane: inhloko yamakhono ekwenzeni izandla zakho
Izingane ze-panama-bell zasehlobo ngezandla zabo
Ukwazi ukubopha umkhono ongenamikhono
I-snowflakes eyedwa ngokweziNhlelo zonyaka omusha wezi-2017, izifanekiso, izithombe eziteshini. Indlela yokusika ama-snowflakes amahle avela ephepheni izingane
Ama-champagne aphekwe kuhhavini
Ukuhlakanipha kubhalele umshado
Indlela yokukhipha indlela yokuqapha, izindlela zomuntu
U-Priogogine we-Iosif wenqaba ulwazi mayelana nokulimala kwemoto
Ngithanda i-pasta, akeke bathi bayongichitha
Yini okufanele ingane ikwazi ukuyenza ngonyaka
Izikhwama zezintambo ezithatha imfashini inkathi yonyaka-ehlobo 2016
Indoda ishintsha kanjani ngemva komshado?
Indlela yokugubha uNyaka Omusha wezingane eziseneminyaka engu-14: imidlalo ezithakazelisayo nemincintiswano
U-Elizaveta Boyarskaya wayemthanda ngendlela elula ku-Instagram, isithombe
Iziphi izipho ezinikezwa abesifazane ngo-Mashi 8
Izimboni zebusika emathini - zokupheka ezihlwabusayo kakhulu zokushukela, isithombo sebhitrudi esinamathinini, i-borsch, igqoka, isaladi ne-caviar
Ukushisa isilwane sezimonyo